Xiddigii hore ee Kooxda Arsenal oo noqday laacibka saddexaad ee sida ugu dhaqsaha badan ku gaaray 50 oo horyaalka MLS-ka ah – Gool FM
Xiddigii hore ee Kooxda Arsenal oo noqday laacibka saddexaad ee sida ugu dhaqsaha badan ku gaaray 50 oo horyaalka MLS-ka ah
(Los Angeles) 10 Mar 2020. Ciyaaryahankii hore ee Gunners, Carlos Vela ayaa noqday ciyaaryahanka saddexaad ee sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaaray 50 gool oo horyaalka MLS-ka Mareykanka ah.
31-sano jirkaan Carlos Vela ayaa noqday ciyaaryahanka saddexaad ee sida ugu dhaqsiyaha badan ku dhaliyey 50 gool taariikhda horyaalka MLS-ka Mareykan.
Waxa ay ku qaadatay inuu 50-kaas gool ku dhaliyo kaliya 61 kulan oo uu u saftay kooxda kubadda cagta Los Angeles, isagoo kaliya ka dambeeya Josef Martinez iyo Zlatan kuwaasoo kulamo yar oo ah 54 ku gaaray goolkaas.
Xiddiga xulka qaranka Mexico ee Vela ayaa sidoo kale sameeyey 20 caawin 61-kaas kulan oo uu ciyaaray.
Carlos Vela ayaa u soo ciyaaray kooxda Arsenal laga bilaabo xilli ciyaareedii 2008/09 illaa 2010/11, waxaana uu u saftay 61 kulan tartammada oo dhan, isagoo u dhaliyey 11 gool isla markaana u sameeyey 8 caawin.
RASMI: Maamulka gobolka Catalonia oo go’aan ka soo saaray kulanka Barcelona iyo Napoli sababo la xiriira Coronavirus
saameyn intee le'eg ayeey ku yeelatay Barcelona bixitaankii Neymar Jr? – Bartomeu ayaa ka jawaabaya